Markus Soder Ayaa Ka Hadlay Albaab Xidhnaanta Horyaalka Bundesliga Wadanka Jarmalka? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Markus Soder ayaa rajo weyn ka qaba in Bundesliga ay dhowaan heli doonto iftiin cagaaran oo ay dib ugu soo laabato albaabadii xidhnaa iyadoo Jarmalka ay yareynayaan talaabooyinka xidhida.
Horyaalku wuxuu ahaa mid aan xad lahayn illaa iyo bishii Marso taasoo qayb ka ah tallaabooyinka lagula dagaallamayo faafitaanka coronavirus, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 3,800 oo qof oo waddanka ku nool.
Si kastaba ha noqotee, Chancellor Angela Merkel ayaa Arbacadii ku dhawaaqday in dukaamada qaar ay bilaabi karaan ganacsi markale isbuuca soo socda, halka iskuullada ay si tartiib tartiib ah dib ufuridoonaan laga bilaabo May 4.
Shirarka waaween lama ogola ilaa ugu yaraan 31-ka Agust, laakiin wasiirka Bavaria Soder wuxuu leeyahay ku dhejinta garoomada madhan waa suurta gal waxaana laga wada hadli doonaa toddobaadyo gudahood.
“Mawduuca kubbadda cagta xirfadlaha ah ayaa laga wada hadli doonaa toddobaadyada soo socda,” ayuu yidhi ka dib shir golaha wasiirrada ay ku yeesheen Munich khamiistii shalay.
Horyaalka laftiisa ayaa haatan sameynaya isku xirnaan isla markaana, waxaan maqlayaa, fikir wanaagsan oo nadaafadeed. Kubadda cagta waa sida xirfad kasta oo kale. Waxaan dib u qiimeyn doonnaa tan markale.
“Markaa waa inaan aragnaa bal in ciyaaraha aan laheyn taageerayaasha loo oggol yahay. Sidaasi darteed ma jiri doono ciyaar daawaneysa daawadayaasha Laakiin waa inaan qiimeynaa taasi.
Ugu dambeyntiina, muhiimada ay leedahay kubada cagta looma arki karo kaliya saameynteeda dhaqaale, laakiin sidoo kale saameynteeda xaga maskaxda, Dad badan tani waa qayb farxad ah oo iyagu iskood isu diyaarin kara.
“Lakin isbuucyada soo socda waxaan ka wada hadli doonaa bal in Ciyaartoyda la’aantiis ay macquul tahay. Waxaan qabaa inay tahay wax la malayn karo.”
Bavaria ayaa hoy u ah kooxda Bayern Munich, oo ah kooxda difaacaneysa Bundesliga iyo kooxda muddada dheer xoogga ku heysay ciyaarta Jarmalka.
Naadiyada labada heer ee ugu sareeya kubada cagta Jarmalka ayaa ku soo laabtay tababarka usbuucii hore, in kasta oo ay jiraan ciyaartoy ka dib talaabooyin adag oo looga leexinayo bulshada.
Madaxa fulinta ee xiriirka kubada cagta Jarmalka (DFL) Christian Seifert ayaa dhawaan shaaca ka qaaday qorshooyin loogu tala galay in Bundesliga uu dib ugulaabto albaabada xirnaa horaantii May.